Quinazoline waa unug caadi ah oo leh qaabka C8H6N2. Waa heterocycle qalab leh oo leh qaab baaskiil ah oo ka kooban laba lakabyo aromatic oo lix-xabbo ah, bir ah benzene iyo giraan pyrimidine. Waa nadiif cad crystalline jilicsan oo biyo ah. Sidoo kale loo yaqaano 1,3-diazanaphthalene, quinazoline ayaa magaceeda ka helay inay noqoto nooc ka mid ah noocyada quuninjiinta. In kasta oo maaddada quinazoleed ee waalidku si dhif ah loogu sheego suugaanta farsamada, beddelka la beddelay waxaa loo soo saaray ujeedooyin daaweyn ah sida wakiilada antimalarial iyo anticancer,
Afatinib la ogolaaday, oo ah daroogo ay soo saartay Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, dawo ay soo saartay Astellas, si loogu daaweeyo bukaannada NSCLC qaba burooyin ay keento isbeddellada EGFR.
GlaxoSmithKline ee daawada lapatinib wuxuu daaweyn jiray kansarka naasaha ama naas-nuujinta naas-nuujinta oo ay la socdaan Roche's capecitabine.
Muuji dhammaan 8 natiijooyinka